ရန်ကုန်နှင့် တူရင်မြို့တို့ကို ညီအမမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်စီစဉ် | Mizzima Burmese
ရန်ကုန်နှင့် တူရင်မြို့တို့ကို ညီအမမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်စီစဉ်
ခင်မျိုးသွယ် | ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၇ မိနစ်
တူရင်မြို့မှာ အီတလီမြောက်ပိုင်းရှိ စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဓိကရမြို့ကြီးဖြစ်ပြီး အီတလီနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အင်အားအရ တတိယ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ FIAT မော်တော်ကား စက်ရုံဌာနချုပ်ဖြစ်သလို Juventus F.C. နှင့် Torino F.C. ဘောလုံးအသင်းတို့၏ မြို့ကြီးလည်းဖြစ်သည်။
နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံစဉ် ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ၂ဝ၁၃-၁၄ ခုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးစားပေး ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့် အီတာလျံရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေး ကုမ္မဏီအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် OECD က ချမှတ်ထားသည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အချက်အပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အားပေးရေးတို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။
ထို့အပြင် ဥရောပသမဂ္ဂက ချမှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုအားလုံးကို အမြန်ဆုံး ပယ်ဖျက်ပေးရန်နှင့် GSP အခွင့်အရေးကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရေး၊ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများကို တိုးမြှင့်ပေးအပ်သွားရေး တို့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အီတလီနိုင်ငံသို့ပေးဆပ်ရန် ကျန်ရှိသည့် ချေးငွေများ ပယ်ဖျက်နိုင်ရန် ယခုနှစ်အတွင်း သဘောတူညီချက် လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရေးနှင့် သက်သာသော ချေးငွေများ ထပ်မံ ပေးအပ်သွားရေး၊ ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေရှိ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရာတွင် လိုအပ်သည့် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သင်တန်းနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်ရေးနှင့် ပံ့ပိုးကူညီရေးတို့ကို
နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by Mizzima News at 5:51:00 PM